China SSQ-156-12A / B Segmented Diamond Cutting Agụba / Disc maka tingcha Granite emepụta na suppliers | Ngwaọrụ Shuangshi
SSQ-156-12A / B Segment Diamond Cutting Blade / Disc for Cutting Granite
Emeputa / Supplier / Wholesaler of 6 ″ (156mm) diamond ọnwụ / okirikiri hụrụ UM UBARA maka ihe / tile / mgbidi uzo / nkume
Net arọ (g) 225g
Agụba dayameta 6 "(156mm)
Disc Bore Size 7/8 "(22.23mm)
Ọkpụrụkpụ Agụba 2.2-2.4mm
6 "(156mm) nkewa okpukpu okpukpu kporo diamond / diski maka igbutu granite.
Ezubere iji nye ngwa ngwa, nke na-eji ire ụtọ n'ọtụtụ ihe, gụnyere Concrete, Light Weight Blocks, Brik, Stone, and Masonry Materials. Enwere ike iji okpukpu kporo. Maka ndị na-egbutu ọkụ ma ọ bụ ọkara. Ogologo mgbasa ozi jikọtara ọnụ, ogologo ndụ ọrụ.
Maka ihe ịrụzi. Beveled onu agụba maka akwadebe gbawara agbawa ihe na nkwadebe usoro mweghachi. A na-arụpụta mma mma diamond dị mma na ụlọ ọrụ ọkaibe.
Ejila obere mpempe diamond na-ezughị ezu ma jiri nkà na ụzụ jikọta ya ghọgburu gị. Emebere agụba a iji nyefee ndụ kachasị, ọkachasị 40% -50% karịa ụkpụrụ ụlọ ọrụ. Emepụtara eriri ndị a ma kwekọọ n'ụkpụrụ ISO 9001. Ndị a pupụtara na-enye otu àgwà ngwaahịa maka ika aha nkesa.
Enwekwukwa Matrix Matrix maka ngwa ngwa na oru oma ọnwụ.
Siri ike ígwè ahu maka abawanye ngwaahịa ndụ.
Standard arbor maka ojiji na ihe niile dakọtara egbutusị.
ekweghị ekwe nke agụ nkwọ iji hụ na ọ dị mma.
Anyị na-enyocha akara ngosi nke flatness iji hụ ma ọ ruru ọkwa.
Anyị na-emekwa ụfọdụ nyocha iji belata ọrụ iji ya.
Professional n'ichepụta nzukọ akara.
Crack Chaser & Tuck Point bụ ụdị Diamond Blade nke na-egosipụta akụkụ dị iche iche nke wedge maka ọsọ ọsọ na-enweghị atụ na ndụ ndụ na-enweghị atụ. Emere Crack Chaser pupụtara maka ihicha ma rụkwaa mkpọtụ ahụ n'ọtụtụ ebe masonry. Ebe isi ihe a na-eji eme ihe maka iwepụ ngwa ngwa ngwa ngwa na nkwadebe nke ọ bụla abrasive. Naa nke uzo imewe na tuck point agụba na-enye ohere a tuck bee fọrọ nke nta niile ngwa agha iche. Ọ ga-anapụta a ngwa ngwa ịkpụ na ma ike na juu ihe na a isi chaser diamond agụba a chọrọ maka ihicha, na-ebuwanye ibu, na idozi cracks / ezughị okè na masonry na-ebupụta. Anyị na-enye ụdị Crack Chaser na Tuck Point Diamond.
Elu àgwà carbon bughi steel matriks ，
65 manganese ígwè ，
High ọkwa diamond ，
Agbata ma ọ bụ karịa mma ，
Bee naanị ihe na mgbidi grooves
Nke gara aga: SSQ-130-9A / B / C High Performance Diamond Hụrụ Agụba maka Wall uzo
Osote: SSQ-156-12HA High nkenke Granite Stone tingcha Diamond Hụrụ Agụba
SSQ-114-8A / B 65 Mn Steel Circular Blades maka ...